यौन (सेक्स) प्राकृतिक कुरा हो । हरेक सामान्य मानिसमा यौन चाहना हुने गर्छ । अधिकांश मनोवैज्ञानिक तथा यौन विशेषज्ञहरू यस कुरामा सहमत छन् कि मानिसको शरीरमा यौन भावना जन्मदेखि नै एक ऊर्जाको रुपमा मौजुत हुन्छ ।
यस्तो यौन ऊर्जा युवाकालमा निकै बलवती हुने गर्छ । मानिसको मस्तिष्कमा विद्यमान लिम्बिक प्रणालीले कामुक इच्छा, कामोत्तेजना, यौन सक्रियता तथा सहवासको प्रक्रियालाई नियम र नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्छ । जब स्त्रीपुरुष एक अर्काप्रति आकर्षित हुन्छन्, त्यसबेला टेस्टोस्टरेन तथा फेनिलथैलामाइन जस्ता हार्मोनहरू निस्कासन हुन्छन् ।
टेस्टोस्टरेनलाई पुरुष हार्मोन भनिन्छ । यो हार्मोनले सेक्स चाहना जगाउन तथा यौनांगलाई उत्तेजित बनाउने कार्य गर्छ । यो हार्मोनले नै स्त्रीपुरुषलाई सहवासका लागि उत्साहित तुल्याउँछ भने फेनिलाथैलामाइनले मुडलाई नियन्त्रित गर्छ । यसका साथ यौन प्रक्रियाको बेलामा एण्डोर्फिन, अक्सिटोसिन जस्ता हार्मोनहरू पनि निस्कासन हुने गर्छन् ।
कामुक वातावरणमा आलिंगन, चुम्बन तथा स्तन मर्दन गर्दा वा यौनांग खेलाउँदा एण्डोर्फिन निस्कासन हुने गर्छ । यो हार्मोनले प्रसन्नता तथा रोमांचकता पैदा गर्छ भने अक्सिटोसिन कामवासनाका लागि सिधा रुपमा जिम्मेवार हुन्छ ।
प्रकृतिले वनस्पति तथा पशुपक्षीलाई विशेष ऋतुमा मात्र यौन (सेक्स)प्रति क्रियाशील बनाउँछ । जब कि मानिसलाई ऋतुको छेकवार छैन ।
मानिस प्रत्येक ऋतुमा यौन क्रिडामा सक्रिय रहन सक्छ । हुन पनि एउटा जवान व्यक्ति शारीरिक शक्तिले यति ऊर्जावान् हुन्छ कि त्यो शक्तिको अभिव्यक्ति शारीरिक काम–क्रियाद्वारा प्रदर्शित गर्ने प्रयत्न गर्दछ ।
त्यसैले जवान व्यक्तिहरु सधै यौन सम्पर्क गर्न लालयित हुन्छन् । र, यौन सम्पर्कबाट एक छुट्टै किसिमको आनन्द पनि प्राप्त गर्छन् ।
यही आनन्दका कारण नै मानिसहरु हमेशा यौन सम्पर्क गर्न आत्तुर हुन्छन् । यौन सम्पर्क केवल पतिपत्नीका बिचमा मात्र नभएर केटा साथी तथा केटी साथीका बीच, परस्त्री वा परपुरुषका साथ तथा यौनकर्मीका साथ पनि हुनसक्छ ।
यदि यौन सम्पर्कमा कुनै बिघ्नबाधा आएको खण्डमा व्यक्तिमा मानसिक तनाव मात्र होइन कि कतिपय मानसिक समस्याहरु पनि पैदा हुन सक्दछ ।
त्यसैले कोरोना महामारीका कारण भौतिक दूरी कायम राख्नु पर्ने वर्तमान परिस्थितिमा यौनसम्पर्क कति सुरक्षित छ वा छैन भन्ने प्रश्न धेरैको मन रहेको छ । कतिपयलाई यौन सम्पर्क गर्न नपाउँदा तनाव बढेको छ भने कतिपय एउटै छानामुनि बस्ने पतिपत्नीहरुले पनि डराइडराइ मज्जाहीन यौन सम्पर्क गरेको अवस्था छ ।
अध्ययन भन्दछ, कोभिड १९ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजिज होइन, यौन सम्पर्कबाट यो रोग सर्दैन । यौन सम्पर्कबाट सार्स कोभ २ अर्थात कोरोना भारइसको संक्रमण भएको कुनै प्रमाण पनि छैन ।
कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा सास फेर्दा तथा संक्रमित व्यक्तिले छोएको, समाएको तथा खोकेको ठाउँमा समाई साबुनपानी हात नधोइकन नाकमुख लग्ने हो भने सर्न सक्दछ ।
तर यौन सम्पर्क गर्दा कोरोना भाइरस पार्टनर सर्ने अहिलेसम्म कुनै वैज्ञानिक तथ्य नदेखिएता पनि संक्रमितलाई चुम्बन गर्दा भने संक्रमण हुन सक्दछ । त्यसैले कोरोना पोजेटिभ व्यक्तिमा कोभिड १९ लक्षण नदेखिएता पनि यौन सम्पर्क नगर्नु ठीक हुन्छ ।
तर जोखिमको अवस्थामा नरहेका पतिपत्नी जस्तो कि घर बाहिर नगएका, घरमै बसेका, बाहिरी मानिसहरुको सम्पर्कमा नआएका र परिवारका कुनै पनि सदस्यहरुलाई कोभिड १९ को लक्षणहरु देखिएको छैन भने पतिपत्नीले कुनै डरबिना निर्धक्क मजाले यौन सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।
जोखिमको अवस्थामा रहेका टाढाका साथीसँग, परस्त्री तथा परपुरुषसँग, यौनकर्मीहरुसँग यौन सम्पर्क नगर्नु नै उचित हुन्छ ।
त्यसो त एउटै ठाउँमा बस्ने कोरोनाबाट पर्याप्त सुरक्षा उपायहरु अपनाएका जोडीहरुले सेक्स गर्नु भन्दा पहिला र सेक्स गरिसकेपछि हातमुख साबुनपानीले धुने तथा मास्क लगाएर यौन सम्पर्क गर्न त्यति खतरा हुँदैन ।
यौन सम्पर्कको विकल्पमा फोन तथा भिडियोमा रमाइला कुराहरु गरेर आनन्द लिन उत्तम हुन्छ । सेक्स टोय अर्को विकल्प हुन सक्दछ ।
तर यस किसिमको यौन सम्पर्कमा पनि सरसफाइको विशेष ध्यान दिनु पर्छ । सेक्स टोय यौन सम्पर्कको एक विकल्प भएता पनि यसले खासगरी महिलाहरुलाई लति बनाउने खतरा रहेको अनेक मनोवैज्ञानिक अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिवार, असार २५, २०७७, ०४:५१:२३
कस्तो आसनमा कतातिर फर्केर बस्ने ?
सोमवार, श्रावण १२, २०७७ डा. मतिप्रसाद ढकाल